समाजवादभित्र दलित र सिल्पीको बहस :: Nepal Post Dainik समाजवादभित्र दलित र सिल्पीको बहस | Nepal Post Dainik
लित समुदाय इतिहासमा पटक पटक विभिन्न बहानामा अपमानित, अपहेलित र उपेक्षित हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि राजनीतिक बजारमा फेरि विगतमाझैँ दलित समुदायलाई अपमानित हुनेगरी नयाँ शब्दको खेती हुँदैछ । त्यसमा पनि हरेक हिसाबले युगौँदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएका उही दलित समुदायमाथि । तर त्यो खेती कति जायज र ऐतिहासिक छ– त्यो बुझ्न जरुरी छ । आजको युगसम्म आइपुग्दा दलित एउटा सङ्घर्ष र बलिदानको साझा नाम वा परिचय बन्न पुगेको छ । तर यसअघि दलितलाई अपमान, अपहेलित र अछुत तथा दासको रूपमा चिनाउने खेल भयो । अहिले पनि त्यो क्रममा कमी देखिएको छैन । अप्रत्यक्ष रूपमा झन् ठूलो विभेदको शिकारमा छन् दलितहरू । तर आज युग धेरथोर भए पनि फेरिएको छ । फेरिने नाममा आफ्नो इतिहासमाथि नै कुठाराघात गर्नु धोका र गद्दारी हो । त्यो कुनै परिवर्तनको नाम होइन । जहाँबाट इतिहास बिग्रेको छ, त्यहाँबाट शासकहरुले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ र नयाँ सिरानीबाट इतिहास सच्याउन जरुरी छ ।
अहिले पनि नेपाली शब्दकोशमा दलितको परिभाषा अछूत र पानी नचल्ने तथा इज्जत प्रतिष्ठा नभएको जातका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा कसैको ध्यान केन्द्रित छैन । यो कस्तो र कसको समाजवाद बन्दैछ ? जुन समाजवादमा सबैभन्दा उत्पीडित र उपेक्षित समुदायको स्थान र पहिचान हँुदैन, विभेदरहित अधिकार र नेतृत्व हुँदैन त्यस्तो समाजवादको के अर्थ ? त्यसैले दलित भनेको एउटा इतिहास हो भने सिल्पी एउटा जाति वा शब्दको खेती मात्र हुन् । समाजवादमा राजनीतिक दल र नेताहरुले दलितलाई बिनाविभेदको शब्द प्रयोग गरेर सम्मानजनक ढङ्गले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार दिएर काँधमा बोक्न सक्ने हिम्मत गर्दैन भने त्यो राजनीतिक दल वा राजनीतिक अभियानले कहिले पनि दलितलाई अमानवीय जीवनबाट मुक्त गर्न सक्दैनन् । केवल दलित भोट बैङ्ककै रूपमा रहिरहने छन् । यसमा कुनै दुईमत छैन । यसर्थ सिङ्गो दलित समुदाय दयाको पात्र होइन, सङ्घर्षशील र अधिकारका पात्र बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म दलित समुदायमा आएको परिवर्तन कसैले दया माया गरेर दिएर आएको परिवर्तन होइन । धेरै ठूलो त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको परिवर्तन हो । राज्यस्तरबाटै यसको रक्षा, प्रयोग र थप विकास गर्न जरुरी छ । जसबाट मात्र दलित समुदायको बाँकी सपना पूरा गर्न सकिन्छ । कुनै राजनीतिक झुन्ड र अभियानले मात्र चाहेर पनि दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर्न सकिदैन । यसलाई राज्य स्तरबाटै वैधानिक रूपमै यसको विभेदरहित पहिचान र समस्याको वस्तुनिष्ठ निदान खोजिनु पर्दछ ।रातोपाटीबाट